Ra’isulwasaare Saacid Iyo Wafdi Uu Hogaaminayo Oo Gaaray Marka
Wafdi uu hogaaminayo Ra’isulwasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) oo maanta kormeerayey deegaanno iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose ayaa goor dhow soo gaaray magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelada Hoose.
Wafdiga Ra’isulwasaaraha ayaa waxaa magaalada Marka kusoo dhaweeyey mas’uuliyiinta maamulka degmada,kan gobolka,saraakiil,waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada ku dhaqan magaalada Marka Cadeey ee xarunta gobolka Shabeelada Hoose.
Ra’isulwasaaraha Wafdigiisa waxaa ka mid ah Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi,Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Mudane C/kariin Xuseen Guuleed,Wasiirka Garsoorka iyo Cadaalladda Mudane C/laahi Abyan Nuur,Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta,Isgaarsiinta iyo Gaadiidka Mudane C/laahi Ciilmooge Xirsi,Wasiirka Wasaaraddda Maalliyadda iyo Qorsheynta Mudane Maxamuud Xasan Suleymaan,Taliyaha Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed Sareeye Gaas C/qaadir Sheekh Cali Diini,Agaasimaha Guud ee Hay’adda Nabad Sugidda Qaranka Soomaaliyeed Eng Axmed Macalin Fiqi,Taliyaha Ciidammada Booliiska General Shariif Sheekh Unaa Maye iyo xildhibaanno.
Waxaa hada ka soconaya xarunta maamulka gobolka Shabeelada Hoose kulan uu Ra’isulwasaaraha Xukuumadda la leeyahay qeybaha kala duwan ee bulshada kulankaasi oo Ra’isulwasaaraha iyo wafdigiisa ay warbixinno kaga dhageysanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas’uuliyiinta maamulka degmada iyo kan gobolka Shabeelada Hooseba.
Qaar ka mid ah Waxgaradka magaalada Marka oo khudbaddo ka jeediyey kulanka hada soconaya ayaa ballan qaaday iney hiil iyo hooba la garab taaganyihiin sidii loosoo celin lahaa sharafta,karaamada iyo dowladnimada umadda Soomaaliyeed.
Ra’isulwasaaraha iyo xubanaha Wasiirrada ee la socda ayaa khudbaddo u jeedin doona qeybaha kala duwan ee kasoo qeybgalay kulankan ayadoo Ra’isulwasaaraha iyo xubnaha la socdana ay bulshada u sharixi doonaan qorshe howleedka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya,kadib kulankana Ra’isulwasaaraha wuxuu booqan doonaa magaalada qeybo ka tirsan.
Wafdiga Ra’isulwasaaraha iyo wafdigiisa waxey saakay kasoo ambabaxeen magaalada Muqdisho oo ay kasoo raaceen diyaarad Helicopter ah oo ay ugasoo degeen deegaanka Shalaanbood oo ay gaadiid kasoo raaceen kuna yimaadeen magaaalada Marka.